By RADIO DALJIR
BOSAASO- Agaasimaha guud ee Radio Daljir Axmed Shiikh Maxamed (Tallman) ayaa ka badbaaday isku day dil kaddib markii rasaas uu ku weeraray askari kamid ah bilayska Puntland ee magaalada Bossaso.
Askariga ayaa isaga oo ku qaylinaya “maxaa Asad Diyaano idiin geeyey” waxa uu xabbado afsaar ah ku ridey Agaasimaha oo xilligaas ka soo baxay xarunta idaacadu ku leedahay magaalada Boosaaso.
“Ilaahay baa i badbaadiyey, xabbad afsaar ah ayuu igu ridey ninkaas askariga ah,” ayuu yiri Tallman.
Radio Daljir ayaa maalmhaan baahinayey barnaamijyo uu kaga hadlayey hay’adda PSF oo uu madaxda horey uga ahaa Murashax Asad Diyaano.
Musharrax Asad Diyaano oo xilkii Taliyaha PSF ka degay, horayna xilka kala wareegey AHN aabbihiis Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa xilkii taliyenimo ee ciidanka PSF hadda ku wareejiyey walaalkiis Maxamuud Cismaan Cabdullaahi.
Maamulka Radio Daljir illaa iyo hadda lalama socodsiin in la soo qabtay ama la xiray askarigii isku dayey in uu Tallman, Agaasimaha Guud ee Radio Daljir, dilo asaga oo isku dayga dil ku sababaynaya “maxaa Asad Diyaano idiin geeyey?”
GAROWE, Puntland- Amar kasoo baxey xafiiska Madaxweynaha Puntland ayaa dib waxaa loogu ogolaadey in Idaacada Daljir gudato wajibaadkedii Dastuuriga ahaa.
Idaacada Daljir ayaa lagu xirey amar kasoo baxey Madaxweynaha Puntland kadib markii ay wareysi ka qaadey ...
Madaxtooyada Puntland oo shir ugu qabatey Cumar Faaruuq magaalada Galkacayo
Puntland 04.07.2016. 14:47
Shirka Xukuumada Puntland oo looga hadlay doorashada Somaliland
Puntland 10.11.2017. 06:46